राजनीति Archives - Page 20 of 94 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
मुख्यमन्त्री शाहीको अर्को खतरनाक गोप्य काण्ड
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:५१ April 5, 2018 Nonstop Khabar
कालीकोट । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अर्को गोप्य रहस्य खुलेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीपत्नी चन्दा शाहीले घरमै बसी–बसी एक दशकदेखि सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाएको खुलासा भएपछि माओवादी केन्द्रभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । शाहीका बारेमा अाएका पछिल्ला केही समाचारले यति निर्लज्ज नेताकाे नेतृत्वमा प्रदेशकाे अागामी भविष्य नै के हाेला भन्ने प्रश्न पनि उठेकाे छ । यो […]
प्रहरी महानिरिक्षकका लागि गोप्य दौडधुप सुरु
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:०२ April 6, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं चैत २२ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश आर्याल एकसातापछि अवकास पाउँदैछन । उनकाे अवकास पाउने दिन नजिकिएसँगै प्रहरीकाे महानिरिक्षक काे बन्ने भन्ने विषयमा ठूलाे चर्चा छ । प्रहरी महानिरिक्षकमा केही समयदेखि ठूलाे राजनीति पनि हुने गरेकाे छ । साेही कारण यसपटक वामगठबन्धनकाे सरकारले कसरी प्रहरी महानिरिक्षक बनाउँछ भनेर चासाे राख्नेहरु पनि धेरै छन् । […]
एमालेले किन बोलायो स्थायी समितिको आकस्मिक बैठक ? यस्तो छ कारण
२० चैत्र २०७४, मंगलवार १२:४४ April 3, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौँ, १९ चैत । नेकपा एमालेले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो साँढे २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण र एमाले माओवादी पार्टी संयोजन समितिको बैठकमा छलफल हुने विषयहरुमा छलफल गर्न एमालेले बैठक बोलाएको हो । एमाले […]
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, संसद अधिवेशन अन्त्यको तयारी
२० चैत्र २०७४, मंगलवार ०९:५० April 3, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं, २० चैत । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै छ । बिहान साढे १० बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले जारी अधिवेशन अन्त्यको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको प्रधनमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि आजै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । अधिवेशन अन्त्यको तयारी हुँदै गर्दा […]
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै
२० चैत्र २०७४, मंगलवार ०९:४३ April 4, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं, २० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै छन् । वैदेशिक भ्रमण गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउने परम्परा अनुसार ओलीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउने उनको सचिवालयले जनाएको छ । ओली चैत २३ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउने […]
गृहमन्त्रीको गम्भीर खुलासा-नेताहरु नै तस्करी र गुण्डा संरक्षणमा लागेका छन्
२० चैत्र २०७४, मंगलवार ०९:११ April 3, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं, २० चैत । सोमबार प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न कार्ययोजनाले मद्दत गर्ने विश्वास गरे । उनले शान्ति सुरक्षाका लागि आफूले कसैसँग सम्झौता पनि नगर्ने उल्लेख गरे । ‘पहिले आफ्नो टाउकामा आफैँ आगो लगाउनुहोस्, त्यो मुढा भए बलेर खरानी बन्छ’, उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘सुन भए […]
पार्टी एकताबारे प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ धारणा !
१९ चैत्र २०७४, सोमबार १७:४० April 2, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौँ, १९ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्यसहित पार्टी एकता हुने बताएका छन् । एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा स्थापित ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गर्न आज साेमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणअघि वा पछि […]
मुख्यमन्त्री शाहीले ६४ वर्षका बृद्धमाथि गरे यस्तो घोर अपमान
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०२:३४ April 2, 2018 Nonstop Khabar
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भेट्न आएका आफ्नै पार्टीका पाका कार्यकर्तालाई मध्यरात कोठाबाट निकालि दिएका छन् । डोल्पा स्थायी घर भएका लोकबहादुर चलाउनेलाई शाहीले राति साढे १० बजे मलाई भेट्न कहिल्यै नआउनु भन्दै झपारेर निकालेका हुन् । चलाउने २०५१ सालबाटै माओवादी पार्टीमा पूर्णकालिन भएका थिए । लामो समयसम्म जेल जीवन हुँदै पार्टीमा क्रियासिल लोकबहादुर माओवादी […]
त्रिवि उपकुलपति खनियालाई क्रान्तिकारीको ५ बुँदे ज्ञापन, यस्ता मागहरु
१८ चैत्र २०७४, आईतवार १७:१४ April 1, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं,१८ चैत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले ५ बुँदे माग राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति तिर्थराज खनियालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आइतबार क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य द्वय कलम बडुवाल र प्रकाश अधिकारीकाे नेतृत्वमा गएकाे टाेलीले उपकुलपति खनियालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । बर्षेनी निजी सिक्षण संस्थाहरुले गरिरहेकाे शुल्क वृद्धिका कारण आम जनताहरु मारमा परिरहेको भन्दै […]
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगित
१८ चैत्र २०७४, आईतवार ०९:०७ April 1, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं, १८ चैत । निर्वाचन समीक्षा गर्न भन्दै यही चैत ९ गतेबाट जारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुने भएको छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको निधनको शोकमा केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका स्थगित हुन लागेको हाे । आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा खड्काको निधनमा शोक प्रस्ताव मात्र पारित हुनेछ र अर्को सूचना जारी […]
Previous 1 … 19 20 21 … 94 Next